अपराध/सुरक्षा – Karnalisandesh
श्रीमानको हत्या गर्ने महिलासहित उनका प्रेमी प्रहरीद्वारा सार्वजनिक
धनगढी। कैलालीमा प्रेमीसँग मिलेर श्रीमानको हत्या गर्ने महिलासहित प्रहरीले दुई जनालाई सार्वजनिक गरेको छ। हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका धनगढी उपमहानगरपालिका-७ बेलीकी २७ वर्षीया अमृता चौधरी र उनका प्रेमी २९ वर्षीय विष्णु चौधरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरु दुवै जना मिलेर अमृताका श्रीमान समेत रहेका २५ वर्षीय रमेश चौधरीको हत्या गरेको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख
पासो लगाएको डोरी करोडौंमा बिक्री हुने अन्धविश्‍वासले एक महिलाको हत्या
काठमाडौं। पासो लगाएर आत्महत्या गर्दा प्रयोग गरिएको डोरी करोडौंमा बिक्री हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासमा परेर ललितपुरमा एक महिलाको हत्या भएको छ। हत्याको आरोपमा महानगरीय अपराध महाशाखाले तीन जनालाई पक्राउ गरेका छ। पक्राउ पर्नेहरुमा मकवानपुर राक्सिराङ गाउँपालिका-५ प्याङचे टोल घर भई ललितपुर महानगर-२८ हरिसिद्धि नयाँबजार बस्ने २३ वर्षीय सविन प्रजा, उनकी पत्नी १८ वर्षीया प्रविना प्रजा र मोरङ पथरी शनिश्चरे नगरप
सिमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी जवान भारतीय तस्करबाट कुटिए
कञ्चनपुर। सशस्त्र प्रहरी बलका जवानमाथि भारतीय तस्करहरुले कुटपिट गरेका छन्। जिल्लाको दोधाराचादनी नगरपालिका वडा नम्बर ८ सुन्दरनगरमा खटिएका जवान देखेर तस्करले कुटपिट गरेका हुन्। अवैध समान ओसारपसार गर्न नदिको भन्दै उनीहरु परिवारसहित आएर पोसाकमै रहेका जवान सुदिप सुनारलाई कुटिएको हो। सोमबार राति भारतबाट अवैध समान नेपाल ल्याउँदा सिमानाकामा खटिएका प्रहरी जवान सुनारले रोकेपछि तस्कर अर्जुनकुमार सहितको टोली
गाड्दै गरेको अवस्थामा बालिकाको शव प्रहरीद्वारा नियन्त्रण, ९ जना पक्राउ
वीरगन्ज। वीरगन्जको मुर्लीस्थित कब्रस्तान (मुस्लिमको शम्शानघाट) मा गाड्न लागेकै अवस्थामा एक बालिकाको शव प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। भारतको बिहार पश्चिमी चम्पारण जिल्लाको इनर्वा खमीया गाँउकी १४ वर्षीया बालिका जयुनत खातुनको शव प्रहरीले कब्रस्तानबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो। शंकास्पद मृत्यु भएकी ती किशोरीको शव अभिभावक र आफन्तले प्रहरीलाइ थाहै नदिई कब्रस्तानमा बिहीबार साँझ लगेर दफनाउन (गाड्न) लागेकै अ
पाकिस्तानबाट काठमाडौं बोलाएर अपहरण, दुई पाकिस्तानी पक्राउ
काठमाडौं। पाकिस्तानबाट सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका फैजान अहमद विमानस्थलबाटै अपहरणमा परेका छन्। पाकिस्तानबाट काठमाडौंमा बोलाएर उनलाई ललितपुरको सिभिल होम्समा बन्धक बनाएको आरोपमा प्रहरीले दुई जना पाकिस्तानी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरबाट खटिएको टोलीले ठमेलबाट मंगलबार राती दुईजनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। पाकिस्तान घर भएका जेसोन महम्मद र
खुकुरी हानाहानबाट घाइते भएका दुई जनालाई एउटै हेलिकप्टरमा उपचारका लागि सुर्खेत
रुकुम पश्चिम। रुकुम पश्चिममा खुकुरी प्रहारबाट दुई जना गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइते दुबैलाई बिहीबार बिहान एउटै हेलिकप्टरमा राखेर उपचारका लागि सुर्खेत पुर्‍याएको छ। बुधबार दिउँसो चार बजेतिर आठबिसकोट नगरपालिका वडा नं. ३ खदी रानीवनका २३ वर्षीय कर्णबहादुर बोहोरामाथि एक समूहले आक्रमण गरी गम्भीर घाइते तुल्याएको थियो। करिब तीन घन्टापछि बेलुका सात बजेतिर सोही ठाउँको सल्लेरीका ६२ वर्षीय लक्षे कामीमाथि अर्
कपनबाट हराएका चार वर्षीय बालक बिहारमा भेटिए
काठमाडौं। काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर १३ स्थित कपनबाट हराएका एक बालक भारतको बिहारमा सकुशल भेटिएका छन्। भारतको बिहार घर भई कपनको टहरामा बस्दै आएका विनोद शर्माका ४ वर्षीय छोरा पियुस सोमबार साँझ ४ बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएका थिए। उनको खोजी गर्दा बिहारमा भेटिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) अशोक सिंहले जानकारी दिए। विनोदकै साथी शंकर दासले उनलाई बिहार
कपनबाट ४ वर्षका बालक सम्पर्कविहीन, खोजी गर्दै प्रहरी
काठमाडौं। काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर १३ स्थित कपनबाट एक जना बालक हराएपछि प्रहरीले खोजी थालेको छ। भारतको बिहार घर भई कपनको टहरामा बस्दै आएका विनोद शर्माका ४ वर्षीय छोरा पियुस सम्पर्कविहीन भएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) अशोक सिंहले जानकारी दिए। उनका अनुसार बालक सोमबार साँझ चार बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएका थिए। मंगलबारसम्म पनि बालक सम्पर्कमा नआएपछ
सुर्खेत। पेट्रोल छर्केर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १ को कार्यालयमा आगजनी गरिएको छ। कार्यालयमा वडाध्यक्ष नभेटेको झोकमा एक युवकले पेट्रोल छर्केर वडाध्यक्ष गंगाराम सुनारको कार्यकक्षमा बुधबार विहान आगजनी गरेका हुन्। प्रहरीका अनुसार वीरेन्द्रनगर-१ कै स्थानीय वासिन्दा वास्ताम लामिछानेले वडाध्यक्षको कार्यकक्षमा आगजनी गरेका हुन्। आगजनीबाट कार्यालयका कुर्सी, सोफा, दराज र त्यहाँ रहेका स
दैलेख। दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा विभत्स अवस्थामा एक जना शिक्षकको शव फेला परेको छ। गुराँस गाउँपालिका-८ छोटेपोखरामा रहेको मालिका माध्यमिक विद्यालयमा सामाजिक विषय पढाउने करिब ४१ वर्षिय शिक्षक नगेन्द्र विसीको शव घाँटी रेटिएको अवस्थामा भेटिएको हो। मंगलबार बिहान सोही विद्यालयमा उनको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। बिहान दुध बेच्न जाने स्थानीयले उनको शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी क